N'usoro n'usoro ọdịyo na video faịlụ bụ nnọọ ihe a aka ọrụ ezie, ma mbata nke ụfọdụ ndị a maara nke ọma video rotators edozi nsogbu a. Otú ọ dị, e nwere nọmba nke video n'usoro n'usoro software omume na-akwado multiple ọdịyo na video faịlụ formats; nke ugbu a isiokwu ekpuchi video n'usoro n'usoro ngwaọrụ na-akwado ndị AVI faịlụ formats na ọtụtụ ndị ọzọ. Nyere n'okpuru bụ ndepụta nke oru oma AVI video rotators na dị free nke na-eri.
Free Video tụgharịa na Bugharia
E wezụga ịcha na nzacha video faịlụ, Avidemux-enye ohere ọrụ iji tụgharịa na bugharia video faịlụ na ala. Ọ na-akwado na-ewu ewu video formats dị ka MPEG, AVI, WMV, MOV na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-ekwe onye ọrụ ka audio codec, video akụkụ na àgwà na-chọrọ mmepụta. Avidemux mere ka ọ dị mfe tinye a video faịlụ na ime mgbanwe iji nhọrọ dịgasị iche iche dị na menu taabụ.
Bara uru presets nke nkịtị mmepụta ihe aga-eme;
Bụzi ihe mgbe ochie interface.
Video rotator dị mfe iji software na awade otu ọrụ ịrụ nke bụ onye ọzọ karịa video adiana. Onye ọrụ nwere ike mfe iji ya Dọrọ na dobe menu iji họrọ ma bugharia video. Ọ na-ewe otutu video formats dị ka ọsọ ọsọ ma na-amị mmepụta na kpọmkwem usoro. Ọ fixes nghazi ma na-eme elu video mma.
Mmemmem ogbe nhazi;
Ọrụ enyi na enyi interface;
A kọmpat video n'usoro n'usoro ngwá ọrụ;
Na-arụ ọrụ dị ka otu oru oma video Ntụgharị.
Jiri mgbe ụfọdụ;
Ole na ole edezi njikwa.
Free video tụgharịa na bugharia bụ kemfe ngwa na-enye ohere ọ ọrụ bugharia video faịlụ na otutu formats dị ka AVI, WMV na mpg. Otú ọ dị, ọ na-ewe ọsọ ọsọ faịlụ na otutu formats ma na-akwado naanị AVI format dị ka mmepụta. Ọ nwere preview ihuenyo na awade dị iche iche playback buttons na ya. Onye ọrụ ike iji nke a software n'otu n'otu ma ọ nwekwara ike wụnye ngwa ụlọ free nke na-eri.
Kedu otu m ga;
Pụrụ ekeghị presets;
AVI mmepụta naanị.
Nke a na-agụnye software dị iche iche video edezi atụmatụ na nwere ike bugharia mpg, ASF, WMV na AVI faịlụ a na-adaba adaba n'ụzọ. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-bugharia video mgbe ọ bụla ogo ha chọrọ bugharia faịlụ; ha nwere ike ịzọpụta faịlụ iji ma otu ma ọ bụ dị iche iche faịlụ aha. Direct video bugharia functionalities dị maka ma abịakọrọ na uncompressed AVI faịlụ.
Easy & kensinammuo iji;
Nnukwu ọnụ ọgụgụ nke video formats.
Limited edezi ikike;
Ole na ole Extra atụmatụ.
Ọ bụla Video Ntụgharị bụ a dakọtara ngwá ọrụ na-akwado dị iche iche video formats gụnyere AVI, MOV, mpg na WMV faịlụ. Ọ a ghọtara dị ka otu n'ime ndị kasị bara uru video n'usoro n'usoro software na-abịa na ọtụtụ atụmatụ gụnyere oke nke adiana; ọ na-enyere ndị ọrụ bugharia faịlụ na 90, 180 ad 270 degrees na ala. Ya ọrụ enyi na enyi interface na àgwà mmepụta nwere dọtara ọrụ na otu oru oma ma dị irè n'ụzọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ bugharia dị iche iche nke video faịlụ video nchịkọta akụkọ, Wondershare Video Editor bụ oké nhọrọ. Dị nnọọ ebe ahụ video faịlụ na usoro iheomume na ị pụrụ bugharia gị videos 90 degrees klookwaisi ma ọ bụ anticlockwise ma ọ bụ akpa ogho ha ekwesị na horizontally.